“Waxaan ku sigtay in aan isku XAARO!” Aqri qiso cajiib ah oo uu Gerard Pique kaga hadlayo arin argagax leh oo ku dhex qabsatay qolka labiska ee Old Trafford iyo sida Roy Keane looga cabsan jiray! – Gool FM
“Waxaan ku sigtay in aan isku XAARO!” Aqri qiso cajiib ah oo uu Gerard Pique kaga hadlayo arin argagax leh oo ku dhex qabsatay qolka labiska ee Old Trafford iyo sida Roy Keane looga cabsan jiray!
Kaafi March 24, 2018
(Manchester) 24 Mar 2018. Gerard Pique waxa uu ka sheekeeyey dhacdo caan ahayd oo kala qabsatay isaga iyo Roy Keane waqtigiisii Old Trafford, waakana hadalkiisa isaga oo u warramaya The Player Tribune.
“Nolosheyda gabi’ahaanba si kale ayey noqon lahayd haddii uusan ahayn Sir Alex Ferguson.
“Waxaan imid Mancehster United aniga oo ah wiil, waxaan ka tagay aniga oo ah nin. Waqti waali ah ayey ii ahayd, maxaa yeelay markaas kahor kama tagin gurigeyga. 17 sano ee hore ee nolosheyda waxaan ku qaatay Spain, Barcelona carbiskeeda, waxaana dareemi jiray in aan u ciyaarayo kooxda School ama wax la mid ah. Qof walba oo halkaas jooga waan aqaanay waxaana u dhawaa qoyskeyga. Markaa kubadda cagta baashaal ayey ii ahayd. Ma fahansaneyn dhineceeda ganacsiga gabi’ahaanba. Kaddib waxaan imid United, gabi’ahaanba wan shoogsanaa.
“Mid ka mida maalmahaygii kowaad ee aan kulan ku ciyaaro Old Trafford, waxaan joognay qolka labiska anaga oo is diyaarineyna, waan argagaxsanaa. Suureyso – waxaan ahayn 18 jir, waxaan fahdiyaa qolka aniga oo xiranaya sigisaanta oo ay I dhinac fadhiyaan Van Nistelroy, Ryan Giggs iyo Rio Ferdinand. Waxaan rabay in aan noqdo mid aan muuqanba, Waxaan ka fekerayey, shaqada qabso oo yaan lagu dareeminba.
“Markaa waan fadhinay oo waxaan sugeynay tababaraha in uu soo galo oo uu nala hadlo, waxaana toos u dhinac fadhiyaa Roy Keane. Qolka labiska aad ayuu u yaryahay oo waxaana is taabanaya lugeheena. Ma jiro firaaqo gabi’ahaanba.
“Shanqadh ma jirto. Isla markiiba, waxaad maqli kartay gariigkan. Oo aad u dabacsan.
“Roy geesaha qolka ayuu fiirinayaa.
“Waxaan dareemay in aan aniga ahay. Waa telefankeyga gacanta. Waxaan ku dhaafay gariir, waxa uuna iigu jiraa kastuumada/nigiska, oo ka dul laad laado madaxa Roy.
“Roy wuu garan waayey meesha qeylada ka imaaneyso. Hadda sida qof waalan ayuu qolka geesihiisa uu eeg eegaya. Indhihiisa oo marba meel fiirinaya, waxa uuna isku dayayaa in uu ogaado.
“Qof walba ayuu ku qeyliyey, yaa leh telefoonkaas!?”
“Waa la aamusay.
“Markale ayuu weydiiyey.
“Mar saddexaad ayuu weydiiyey.
Yaa leh teleefankaas F*****g.!”
“Ugu dambeyn, waan hadlay, sida wiil yar. Si aad u dabacsan, waxaan dhahay, “Waan ka xumahay. Waa keyga.”
“Roy gacmihiisa ayuu garabka iga saaray, wuu qoslay, waxa uuna ii sheegay in aan ka wal walin.
“,,,,,,Maya, dabcan waan kaftamayaa! Roy wuu xanaaqay! Qof walba ayuu inta horistaagay ku qeyliyey! Aad ayaan u baqayey. Waxaan ku sigtay in aan isku xaaro. Laakiin waxa ay ahayd cashar wanaagsan.”
XOG XIISE BADAN: Kooxaha fasalka soo aaddan usoo baxa CL oo heli doona lacagtii abid ugu badnayd!
Diktooro cilmi nafsiga bartay oo u dhashay Mareykanka ayaa daraasad ku sameenaya Maxamed Saalax - Ogow waxyaabaha ay baarayaan!